သီရိဂျေမောင်မောင် | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (မ) / သီရိဂျေမောင်မောင်
Category Archives: သီရိဂျေမောင်မောင်
Thiri J Maung Maung
ထွဏ်းထွဏ်း+သီရိဂျေမောင်မောင် – မင်းအတွက်က်ိုယ်ထာဝရ
သီချင်းဟောင်းလေးတွေနဲ့ ပြန်ခံစားကြည့်ရအောင်ဗျာ …… ၁. မင်းအတွက်ကိုယ်ထာဝရ ၂. နတ္ထိအခန်း ၃. ရှင်သန်ရဲရဲ ၄. နင်ဟာငါ့ရဲ့အသည်း ၅. အားလုံးကောင်းသွားမှာပါ ၆. သွားမယ်မတားနဲ့ ၇. အချစ်ဒဏ် ၈. အဓိပါယ်ရှိသောလူ ၉. အသစ်တစ်ဖန် ၁၀. ကြင်နာသူသို့တယ်လီဖုန်း L>ownload Credits : mapu (mmcpcommunity.net)
October 27, 2011 mars အခွေ (အများ) ထွဏ်းထွဏ်း သီရိဂျေမောင်မောင် Myanmar Artist 1 Comment
သီရိဂျေမောင်မောင် – အကောင်းဆုံးတေးများ
တောင်းဆိုထားသော Than Zin နဲ့ MMA တေးပရိသတ်များအတွက် 01 – ဘလက်ကော်ဖီ 02 – အလိုအပ်ဆုံး 03 – တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ကာ 04 – လမ်းတွေ 05 – မနေခဲ့ဘူး 06 – အိပ်မက် ၃၁ 07 -အစစ်ဖြစ်မယ့်နေ့ 08 – စွန့်လွှတ်ခဲ့သူ 09 – မင်းရှိရင် 10 – မခွဲနိုင် 11 – အချစ်ဆုတွေတောင်းတဲ့ည
July 16, 2010 Yee Wai Aung အခွေ (တကိုယ်တော်) သီရိဂျေမောင်မောင် thiri jmgmg2Comments
Another Starry Sky
01. Lay Lay Wah – Mingalarbar 02. Phyu Phyu Kyaw Thein – I’m Waiting For U 03. Irene – We Gotta Try Today 04. Thiri Jay Mg Mg – Another Starry Sky 05. Lay Lay Wah – Blue Moon 06. Chan Chan – The Door Is Just A Push In 07. Labyet Gabyar – Those … Continue Reading →
August 18, 2009 koyazar ငြိမ်းငြိမ်းအိ ဖြူဖြူကျော်သိန်း လေးလေးဝါး မစ်ကီကိုးလ် သီရိဂျေမောင်မောင် New Myanmar Albums အိုင်းရင်း ချမ်းချမ်း 14 Comments
01. မိုးသက်တင် – ချစ်သူကို 02. မိုးသက်တင်, ရေဗက္က၀င်း – နေပါစေ 03. ဇော်ပိုင် – ကောင်မလေး 04. ရဲလေး – သံသရာအစဉ်အဆက်ဆက် 05. မိုးသက်တင်, Bambino – No….Darling 06. ရာဇာနေ၀င်း ဖြူဖြူကျော်သိန်း – မကြုံဖူးတော့ခက်တယ်သိပ်ချစ်သွားတယ် 07. မိုးသက်တင် Lဆိုင်းဇီ – နှစ်ကိုယ်ကြား 08. ဟေမာနေ၀င်း – ဝါဆို 09. အောင်ရင် – မင်းသိရဲ့လား 10. မိုးသက်တင်, Englandစိန် – ဘာလိုသေးလဲ 11. မိုးသက်တင,် ဇာလေး – ဒီအတိုင်းဘဲ 12. မိုးသက်တင,် သီရိဂျေမောင်မောင် – လမင်းလေးချစ်သူ … Continue Reading →
May 11, 2009 Mad Computerist အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) ရာဇာနေ၀င်း ရဲလေး ဖြူဖြူကျော်သိန်း အောင်ရင် ရေဗက္က၀င်း ဇော်ပိုင် ဟေမာနေ၀င်း သီရိဂျေမောင်မောင် Bambino Lဆိုင်းဇီ Myanmar Artist4Comments
၀၁။ တို့တွေမြူးမယ် – အဖွဲ့ ၀၂။ ကျီစားတာလား – လီလီနိုင်ကျော် + မိုးမင်း ၀၃။ သင်္ကြန်သီချင်း – ချောစုခင် ၀၄။ အဟောင်းအတိုင်းအသစ် – သျှီ ၀၅။ စိုအောင်ပက်လိုက် – ဆုန်သင်းပါရ် ၀၆။ ကဲနေပြီ – တွင်ကယ်လ် ၀၇။ ဖြူနီပြာဝါ – လီလီနိုင်ကျော် ၀၈။ မဏ္ဍပ်ထဲကလူ – ဆုန်သင်းပါရ် ၀၉။ ပိတောက်ကပွဲ – သီရီဂျေမောင်မောင် ၁၀။ နှစ်ကူးပန်းချီ – တွင်ကယ်လ် + မိုးမင်း ၁၁။ ဧပြီ (၁၆)ရက် – သီရိဂျေမောင်မောင်
March 7, 2009 koyazar အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ဆုန်သင်းပါရ် ချောစုခင် သီရိဂျေမောင်မောင် သျှီ သင်္ကြန်သီချင်းများ Myanmar Artist တွင်ကယ်လ် လီလီနိုင်ကျော် မိုးမင်6းComments
၀၁။ သင်္ကြန်မလေး – မောင်မောင်ဇော်လတ် ၀၂။ အိုကေ—နားထား – ရှင်ဖုန်း ၀၃။ ပျော်ပါစေ သံချပ်သီချင်း – အဖွဲ့ ၀၄။ သင်္ကြန်မိုး – ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၀၅။ မုန့်လုံးစက္ကူကပ် – ဂရေဟမ် ၀၆။ နွေဦးကဗျာ – No ၀၇။ ချမ်းပါတယ် -သီရိဂျေမောင်မောင် ၀၈။ မန္တလေးသားဖြစ်ဖို့ – ဖြိုးကြီး ၀၉။ ကြွက်လည်းလန် ခွက်လည်းလန် – တင်ဇာမော် ၁၀။ ရှာပုံတော်မင်းသမီး – ယုဇန ၁၁။ သင်္ကြန်ဆိုတာဒီလိုပဲ – မီးမီးခဲ ၁၂။ ဆင်ခြေပေးတာ – အယ်နောင်း ၁၃။ ယနေ့လူငယ်ရိုးရာသင်္ကြန် – စိုင်းစိုင်း
March 4, 2009 mmsong ဖြိုးကြီး အခွေ (အများ) အယ်နောင်း စိုင်းစိုင်း ထွန်းအိန္ဒြာဗို ဂရေဟမ် ရှင်ဖုန်း မောင်မောင်ဇော်လတ် တင်ဇာမော် ယုဇန မီးမီးခဲ သီရိဂျေမောင်မောင် သင်္ကြန်သီချင်းများ No 8 Comments
၁။ ဇာတ်တော်ထဲမှာအလွမ်းဆုံး – အငဲ ၂။ ပန်းနုချစ်နှုတ်ခမ်း – ဇော်ပိုင် ၃။ ကြိုးငွေချည်နဲ့ ရွှေစင်အပ် – တင်ဇာမော် ၄။ သီချင်းများနဲ့လူ – ထူးအိမ်သင် ၅။ ရာဇ၀င်ရိုင်းတယ် – လေးဖြူ ၆။ Kiss Me Quick – သီရိဂျေမောင်မောင် ၇။ ရဲရဲရင့်ရင့်ရင်ဆိုင် – ထွဏ်းထွဏ်း ၈။ အားလုံးအဆုံးကစမယ် – မို့မို့ဇော်ဝင်း ၉။ မင်းသိဖို့ကောင်းတယ် – မျိုးကြီး ၁၀။ သွား.. မယုံဘူး – ဆုန်သင်းပါရ် ၁၁။ မေမေနဲ့လာတွေ့ပါ – မီးမီးခဲ ၁၂။ ရင်ဖွင့်ပြချင်တယ် – ၀ိုင်းဝိုင်း
February 10, 2009 mmsong အငဲ အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ထူးအိမ်သင် ထွဏ်းထွဏ်း ဆုန်သင်းပါရ် ဇော်ပိုင် လေးဖြူ တင်ဇာမော် မို့မို့ဇော်ဝင်း မီးမီးခဲ မျိုးကြီး သီရိဂျေမောင်မောင်9Comments
ဇော်ဝင်းထွဋ် ရင်ဂို စည်သူလွင် သီရိဂျေမောင်မောင် (သံလိုလူသား)
၁၉၉၆ ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့အခွေလေးပါ ခေါင်းစဉ်တွေတော့ မေ့ကုန်လို့တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ ကိုဝေထွန်းတို့ ဗိုလ်ကျင်တို့ Emperor လူဟောင်းတွေရဲ့ လက်ရာ ဟောင်းလေတွေပေါ့ဗျာ အလွမ်းပြေပေါ့ နောက်ထပ်အခွေဟောင်းလေးတွေလဲထပ် တင်ပေးပါအုံးမယ် Rock ‘N’ Roll Never Die
February 3, 2009 ma pu စည်သူလွင် ရင်ဂို ဇော်ဝင်းထွဋ် သီရိဂျေမောင်မောင်5Comments
၀၁။ ကြားစကား – ရေဗက္ကာဝင်း ၀၂။ မျက်ဝန်းအဓိပ္ပါယ် – မို့မို့ ၀၃။ စိတ်မချဘူး – သီရိဂျေမောင်မောင် ၀၄။ တစ်ဖက်သက် – ကြိုကြာ ၀၅။ ကောင်းကင်ပြာ – အိမ့်ချစ် ၀၆။ ရင်ခွင်နန်းတော် – မီမီဝင်းဖေ ၀၇။ ပြောမှဖြစ်မယ် – ငြိမ်းငြိမ်းအိ ( အင်္ဂလန်စိန် ) ၀၈။ လေနှင်ခဲ့သူ – ပိုးရည် ၀၉။ ထားရစ်ခဲ့ -ဇာလီနိုင် ၁၀။ မင်းမသိဘူးလား – ခတ္တာ ၁၁။ မျက်ဝန်းထဲမှာအဖြေရှာ – ကေဂျာနူး ၁၂။ အပြင်းစားသတ္တုများ – အေပရယ်
November 4, 2008 ME *MMA* ငြိမ်းငြိမ်းအိ ကြိုးကြာ အခွေ (အများ) ဇာလီနိုင် ရေဗက္က၀င်း ခတ္တာ မို့မို့ မီမီဝင်းဖေ သီရိဂျေမောင်မောင် Myanmar Artist Leaveacomment
မင်းပေးတဲ့ကမ္ဘာ နှင့် CITY FM ( ၂ နှစ်ပြည့် )
၁။ ကလေးအတွေး – စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်+တင့်တင့်ထွန်း ၂။ ယုံလား – ဇော်ဝင်းထွဋ်+ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၃။ ရှေ့ဆက်ရန်စဉ်းစားပါ – Rဇာနည်+ဆုန်သင်းပါရ် ၄။ မင်းပေးတဲ့ကမ္ဘာ – မင်းမော်ကွန်း+မို့မို့ ၅။ ပေးဆပ်ခြင်းများစွာနဲ့ – ဒွေး+သီ၇ိဂျေမောင်မောင် ၆။ အချစ်တစ်ခုဘ၀တစ်ခု ၇။ တွဲလက်များ – ထူးအယ်လင်း+မီးမီးခဲ ၈။ ရော့ယူလိုက် – ဂရေဟမ်+ခိုင်သင်းကြည် ၉။ အချိန်နဲ့နေရာ – မျိုးကျော့မြိုင်+ကြည်လဲ့လဲ့ဦး ၁၀။ နေ့တိုင်း ညတိုင်း – ရန်အောင်+ချောစုခင်
August 29, 2008 mmsong အခွေ (အများ) စိုင်းစိုင်း ထုးအယ်လင်း ထွန်းအိန္ဒြာဗို ဂရေဟမ် ရန်အောင် ရာဇာနေ၀င်း ဆုန်သင်းပါရ် ဒွေး ရွှေထိုက် ဇော်ဝင်းထွဋ် ခင်ဘုဏ်း တင့်တင့်ထွန်း မို့မို့ မင်းမော်ကွန်း မီးမီးခဲ မျိုးကျော့မြိုင် သီရိဂျေမောင်မောင် Rဇာနည်7Comments